Onye njem ọhụrụ ahụ: Ịchọ ebumnuche ka Ụwa na-emepegharị
Location: Mbido » Ịdee » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Onye njem ọhụrụ ahụ: Ịchọ ebumnuche ka Ụwa na-emepegharị
American Hotel & Lodging Association (AHLA) bụ naanị otu mba na-anọchite anya akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ebe US. N'ịbụ nke dị na Washington, DC, AHLA na-elekwasị anya na nkwado atụmatụ, nkwado nkwukọrịta na mmemme mmepe ọrụ iji kwalite ụlọ ọrụ ahụ n'ihu. N'ihi oria ojoo nke COVID-19, ile ọbịa bụ ụlọ ọrụ izizi metụtara ọ ga-esokwa n'ime ndị ikpeazụ gbakere.
Na State of the Hotel Industry Report AHLA na-ewebata onye njem n'ọdịnihu.
Ọrịa ọjọọ ahụ agbanweela ọtụtụ ndụ kwa ụbọchị, site n'otú ndị mmadụ si aga ọrụ na ụlọ akwụkwọ gaa n'otú ha si azụ ahịa na ịkpakọrịta. Ọ bụ ezie na ụfọdụ omume sitere n'oge a ga-emecha daa, COVID-19 emela akara na-enweghị ike ihichapụ na ndụ - na njem - dịka anyị si mara ya.
Ihe mkpali dị iche iche na-akwali
N'ịga n'ihu, ụlọ ọrụ nkwari akụ ahụ ga-enwe mmetụta nke ụzọ ndị na-azụ ahịa siri gbanwee n'ihe ha chọrọ yana otu ha si akpa àgwà na itinye aka na ụdị.
Kama ilekwasị anya na isi na ọnụahịa na ịdị mma n'ime mkpebi ịzụrụ, ndị njem ọhụrụ a na-akpali ịzụta ihe ndị gụnyere ahụike na nchekwa, ịdị mfe na ịdị mma, nlekọta, ntụkwasị obi, na aha.
N'ezie, 44% nke ndị na-azụ ahịa US na-ekwu na ọrịa na-efe efe mere ka ha chegharịa echiche nke onwe ha wee tụleghachi ihe dị mkpa na ndụ, dịka nyocha Accenture na-adịbeghị anya. Otu nnyocha ahụ na-ekpughe na 49% chọrọ ka ụlọ ọrụ ghọta otú mkpa ha si gbanwee n'oge ọgba aghara ma dozie mkpa ndị a.
Kedu ihe ọzọ, 38% na-atụ anya ka ụdị ngwaahịa ga-ebukwu ibu maka ịkpali ha na ime ka ha nwee mmetụta dị mkpa kama ịme naanị ha.
Mgbe ọ na-abịa kpọmkwem na họtel, ndị njem ọhụrụ na-etinye ego na gburugburu ebe nchekwa na ịdị ọcha, mgbanwe na iwu ntinye akwụkwọ ntaramahụhụ, ọrụ ndị ahịa dị mma, ngwaahịa na-adigide, na mmetụta dị mma na ọha mmadụ.
Ọtụtụ ndị na-ekwu na ha dị njikere ịkwụ ụgwọ maka nhọrọ ndị a na ịgbanwe gaa na ndị na-eweta njem dị iche (ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụgbọ elu, ụlọ ọrụ njem, na OTA) ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. N'ezie, 45% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha na-atụle ịkwaga onye na-eweta njem ha na-eji, ma ọ bụ kpamkpam ma ọ bụ akụkụ, n'ime ọnwa isii na-esote otu afọ.
Ebili nke onye njem ntụrụndụ ọhụrụ
Ndị njem ntụrụndụ nwere mkpali ọhụrụ a ga-abụ nnukwu ike na-achọ njem njem na 2022 - mgbanwe pụtara ìhè nke malitere n'afọ gara aga ka ọtụtụ afọ nke njem azụmahịa bụ isi n'ime ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Site na atumatu njem ụlọ ọrụ ka na-aga n'ihu, njem ntụrụndụ ga-aga n'ihu na-agbake ngwa ngwa na 2022, na-eme ka ọnọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ chọrọ. Dabere na nyocha nke Kalibri Labs, n'ime oge ezumike ezumike nke 2022 ga-alaghachi na ọkwa 2019, mana njem azụmahịa ga-agbasi mbọ ike iru 80% nke ọkwa 2019. Nke a pụtara na òkè nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-emefu n'ụdị njem ga-aga n'ihu na-atụgharị site na tupu ọrịa na-efe efe; na 2019 azụmahịa njem mebere 52.5% nke ụlọ ọrụ ego ego na 2022 a na-atụ anya na ọ bụ naanị na-anọchi anya 43.6%24 N'ezie, amụma bụ na okpomọkụ nke 2022 ga-abụ otu n'ime ike mgbe maka ntụrụndụ njem.
Ọtụtụ ụdị azụmaahịa ụlọ oriri na ọ hotelụ hotels e lekwasịrị anya na mkpa ndị ahịa ahịa dị ka iri nri na saịtị, ọrụ ịsa ákwà, akụrụngwa mgbatị ahụ, na ebe azụmahịa. Ihe eji enyere ndụ aka nke ndị njem ntụrụndụ na-atụ anya ya, dị ka spas, ọdọ mmiri, ma ọ bụ njem dị mfe gaa n'ebe ndị njem nlegharị anya, na-abụkarị ihe a na-elekwasị anya nke abụọ.
N'ihi ya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị a ga-achọ ka ha mee mgbanwe nhazi na otu ha si adọta,
tụgharịa, ma jigide ndị ahịa ntụrụndụ.
Tụnyere ndị njem azụmahịa, ndị njem ntụrụndụ na-achọkwu nduzi maka usoro ntinye akwụkwọ na ozi ndị ọzọ gbasara ebe a na-aga. Ha na-azụta dị nnọọ iche karịa ndị njem azụmahịa. Ọ dị obere maka nkọwapụta na ịdị mma dịka ọ bụ maka ịgbakwunye ọrụ na ofufe mgbe ntinye akwụkwọ mbụ gasịrị na mmụọ nke nchọpụta na njem. Ịnyefe ndị njem ntụrụndụ ga-adị mkpa n'ihi na a ga-enwe ọtụtụ n'ime ha na 2022.
Ihu ọhụrụ nke onye njem azụmahịa
Ọ bụ ezie na ọchịchọ ime njem achụmnta ego ga-ebelata nke njem ntụrụndụ, ọ bụghị ihe gara aga, dị ka ụfọdụ na-arụrịta ụka. Nke a bụ eziokwu karịsịa na United States, ebe njem azụmahịa kacha ewu ewu n'ụwa.28 njem azụmahịa n'ozuzu na-atụ anya na ọ ga-abawanye na 2022 ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, na, dịka nyocha nke Kalibri Labs, site na Q3, a na-atụ anya iru 80. % nke ọnụ ọgụgụ 2019 Ọ bụ ezie na a naghị atụ anya mgbake zuru oke ruo 29, a na-atụ anya na njem azụmahịa zuru ụwa ọnụ ga-abawanye site na 2024% na 14, na United States na China na-ahụ ọganihu kachasị elu-ha abụọ na-atụ anya na ha ga-eto site na 2022%
Na nnukwu jikwaa ụlọ ọrụ njem ala- na eleghị anya ọ dịghị mgbe ịlọghachi kpọmkwem dị ka ọ bụ tupu nsogbu-obere na ọkara-sized Enterprises (SMEs) ga-eduga ụzọ na azụmahịa mgbake na 2022. Nke a na-aga n'ihu a omume malitere na 2020 mgbe. Ọnụ ọgụgụ nke njem SME gbadara mana ọ bụghị n'otu oke njem azụmahịa ndị ọzọ n'oge oke ọrịa a.
Ndị isi n'ofe ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụgbọ elu, ndị na-ebunye ụgbọ ala na ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem egosila na akaụntụ SME ha lọghachiri ngwa ngwa na-apụta na 2020 ma na-aga n'ihu karịa ụlọ ọrụ taa. Ha na-ekwu na nke a bụ na obere ụlọ ọrụ malitere ịlaghachi n'ọfịs ngwa ngwa, na dịka akụkụ nke nke a, na-etinye ndị ha n'okporo ụzọ ngwa ngwa. Ha kwenyekwara na njem SME na-enweta site na mmachi njem ole na ole yana atumatu njem na-agbanwe agbanwe. Ndị isi ndị a na-ahụ ihe na-eto eto site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka obere ndụmọdụ, iwu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego, na ndị na-ere ahịa, ma na-atụ anya karịa otu ihe ahụ n'ime 2022.
Ngalaba SME na-anọchite anya ohere dị elu maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ iji mejupụta ọnụ ụlọ etiti izu wee dozie usoro ihe ntụrụndụ ndị a na-atụ anya ya nke ukwuu. Nke a bụ ahịa a na-emebeghị eme nke ọma—nke akụkụ ụlọ ọrụ kacha nwee mkparịta ụka na-ekpochapụkarị ya. Maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ iji nweta ohere a nke ọma, ọ ga-adị mkpa ịmepụta kọntaktị na atụmanya ma ghọta mkpa nke akụkụ a. Ọsọ na ịdị mma ga-aga n'ihu dị mkpa, mana ndị njem azụmaahịa SME ga-elekwasị anya na ahụike na nchekwa ugbu a karịa ka ọ dị na mbụ.
Akụkụ ndị njem na-apụta ga-ekiri
Ọbịbịa nke ọrụ dịpụrụ adịpụ n'oge ọrịa na-efe efe-na usoro ọ na-aga n'ihu ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ mepụtara gburugburu ọrụ na-agbanwe agbanwe n'ihi mkpa ọ dị - akwalitela mpụta nke akụkụ ndị njem ọhụrụ na-agwakọta azụmahịa na mmasị ntụrụndụ.
Njem ihe na-atọ ụtọ - nke ndị njem na-eme njem ntụrụndụ na njem azụmahịa na-apụ na ibe ha - ka a na-akpọ akwa ọlaọcha na-efe efe. Ọ bụ ezie na nhazi ndị a abụghị ọhụrụ, ha na-abụkarị ndị njem na-eto eto tupu ọrịa a.
Taa, njem bleisure bụ isi n'etiti ndị njem na-azụ ahịa n'ofe igwe mmadụ. N'ezie, otu ọmụmụ 2021 nke ndị njem azụmaahịa zuru ụwa ọnụ chọpụtara na 89% chọrọ itinye ezumike nkeonwe na njem azụmahịa ha n'ime ọnwa iri na abụọ na-abịa.
Ụfọdụ ndị ọkachamara na-eme njem na-eche na ijifega nzukọ na ijifeghachi n’ụbọchị nzukọ ga-abụ ihe ochie nakwa na njem ntụrụndụ ọtụtụ ụbọchị ga-emecha ghọọ “njem azụmahịa ọhụrụ.”
Ngbanwe a ga-ekwe omume n'ihi na ụlọ ọrụ na-anabatakarị ụdị njem azụmahịa a.
Ndị na-akwagharị dijitalụ - ndị nwere ike ịrụ ọrụ site na ebe ọ bụla wee gaa n'okporo ụzọ - na-arị elu. Ha na-anọchite anya ntụgharị uche miri emi nke mgbanwe ọdịnala dị n'etiti ọrụ na njem, ebe ndị mmadụ na-arụ ọrụ
ịga njem ma ọ bụ njem maka ọrụ. Ndị na-akwagharị dijitalụ na-eme njem mgbe ha na-arụ ọrụ, na-akwụsị n'ebe dị iche iche na-anọ ogologo oge ha chọrọ, wee na-aga n'ihu. Ịnweta njikọta bụ naanị ihe na-egbochi nhọrọ njem ha. Skift akọpụtala na nde ndị America 3.7 nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ibi na ịrụ ọrụ dị ka ndị na-akwagharị dijitalụ. Ọ bụ ezie na akụkụ niche taa, nyocha ahịa na-egosi na ọ ga-eto ngwa ngwa ma dị ike.
Anyị nwekwara ike ịtụ anya nhụsianya nke akụkụ ndị a ka ahụmihe ndị njem nlegharị anya na-akwali ha n'ụzọ ụdị arụ ọrụ dijitalụ na-adịgide adịgide.
Usoro teknụzụ iji lelee
Nkà na ụzụ na-arụ ọrụ dị mkpa na-arịwanye elu n'ime ka ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwee ike ịzaghachi mkpa na mmasị ndị njem na-agbanwe. Anyị sonyeere OracleHospitality iji ghọta usoro teknụzụ kachasị a na-atụ anya maka 2022 na gafere
Idobe ya mmadụ na teknụzụ. Nhazi nke teknụzụ ga-ewe
ọzọ na-aga n'ihu, yana ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eji teknụzụ dijitalụ mee ka ọrụ dị mfe na
ọzọ, afọ onye ọ bụla ọbịa na ọhụrụ ọbịa ahụmahụ. Nke a gụnyere
ihe niile site na onye ọ bụla nri na ihe ọṅụṅụ nhọrọ na mgbanwe nbanye na
oge nlele iji gbasaa bandwit ọnụ ụlọ maka akụkụ ndị njem niile. Ọ bụ ezie na a maara ụlọ oriri na ọṅụṅụ okomoko karịsịa maka ọrụ akọwapụtara site na mmetụ aka nke onwe, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ụdị ọ bụla ga-eji ngwá ọrụ nkà na ụzụ na-enyere ha aka "ịnweta ihe ọmụma," na-eji nwayọọ nwayọọ na-eme ka ahụmahụ ndị ọbịa na izute ma ọ bụ karịa ụkpụrụ ọrụ eguzobere.
Mweghachi njem ndị ọbịa na ndị ọrụ. Ekwentị mkpanaaka, ngwaọrụ ọrụ onwe na-enye ohere
ndị ọbịa ịnyagharịa ọtụtụ n'ime njem ndị ọbịa ọdịnala-site na ntinye akwụkwọ ruo
checkout-na-enweghị ka gị na ndị ọrụ na-akpakọrịta ozugbo. N'ihi ya, ndị ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ
na-etinye obere oge na ọrụ, dị ka nhazi ndenye nbanye, ma nwee ike ịchụso
atụmatụ ndị nwere ike ime ka mmetụta dị ukwuu na ọrụ ndị ahịa.
Ngwọta teknụzụ na-agbanwe n'ime ụlọ. Ruo ọtụtụ afọ, agbụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ukwuu enweela ndị otu ụlọ na-emepụta njikwa ihe onwunwe nke ha yana ndoputa etiti
usoro. Mana enweghị njikọ, okwu ndakọrịta, na nsogbu nnabata-
yana ọnụ ahịa idobe ihe ngwọta ndị a dị mkpa na agile-na-emepụta ihe ịma aka
maka ndị otu ụlọ. Ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-emezigharị n'oge ọrịa na-efe efe, na
ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na mgbake na uto, ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-esi na ngwá ọrụ ụlọ na-aga n'ihu na-enye onyinye site n'aka ndị na-ere ahịa ụlọ ọrụ. Ngbanwe a agaghị ebelata naanị ụgwọ ọrụ, kamakwa kwalite onyinye ọrụ nye ndị ọrụ na ndị ọbịa.
Ịgbasawanye ojiji nke PMS agile. Sistemụ njikwa ihe onwunwe (PMS) bụ isi
nke ọrụ nkwari akụ. N'ịbụ ndị na-eto ngwa ngwa dị nso na ngwa ndị "kwụpụrụ" ahụ
PMS, ngwa ngwa, dị mfe na njikọta ọnụ ala ma ọ bụ enweghị ọnụ bụ ihe dị mkpa maka ịga n'ihu
ihe ọhụrụ na gburugburu ebe obibi teknụzụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ nweghị onye na-eweta PMS nwere ike izute ya
chọrọ onye ọ bụla hotelier. N'ihi ya, ndị na-arụ ọrụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-agbanyekwuwanye na ngwọta PMS nke nwere netwọk na-eto eto nke ndị mmekọ na-emekọrịta ihe na-enye ike gbasaa.
Ọnụọgụ 5 - Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-atụgharị na nkà na ụzụ iji nweta njikere n'ọdịnihu
Ọzọ na: Covid-19 | Business | Njem azụmahịa | Technology | China | United States | Accenture
SAUDIA weputara usoro nlekọta njem B2B ọhụrụ Business|
FDA kwadoro ọgwụgwọ mbụ maka ọrịa Wilson n'ime ihe karịrị afọ iri ise United States|
Njem nlegharị anya Martinique na-emejuputa atumatu ọhụrụ maka America United States|
Accenture Business Njem azụmahịa China Covid-19 Technology United States
Mweghachi njem ọhụrụ na-ewelite mgbanwe
Akụkọ ụlọ ọrụ nkwari akụ steeti 2022
Ihe kpatara ozi ndị njem n'ezie ji dị mkpa
Ahịa nri ụmụ ahụhụ ga-eto na CAGR siri ike nke...
Ọ bụrụ na ị mee ya nke ọma, ha ga-abịa
Ndị njem nlegharị anya Gris na Ịtali ọhụrụ emeri emeri
IATA: nkwalite siri ike na arụmọrụ nchekwa ụgbọ elu
Ị chọrọ ịmụ mba ọzọ? Mba iri kacha elu maka agụmakwụkwọ...